A rụrụ Igbe ahụ (1-9)
Ihe e ji adọsa ọkụ (17-24)
Ebe ịchụàjà insens (25-29)
37 Bezalel+ wee jiri osisi akeshịa rụọ Igbe ahụ.+ Ọ dị kubit* abụọ na ọkara n’ogologo, otu kubit na ọkara n’obosara, nakwa otu kubit na ọkara n’ịdị elu.+ 2 O ji ọlaedo a na-agwaghị agwa machie ya ime na azụ, jirikwa ọlaedo kpụọ ihe ịchọ mma gburugburu ọnụ ya.+ 3 O jizi ọlaedo kpụọ ihe anọ dị okirikiri ndị a kwụnyere n’elu ebe ụkwụ ya anọ dị. Abụọ dị n’otu akụkụ ya, abụọ adịrị n’akụkụ ya nke ọzọ. 4 O ji osisi akeshịa rụọ okporo osisi abụọ ma jiri ọlaedo machie ha.+ 5 O wee tinye okporo osisi ndị ahụ n’ihe ndị ahụ dị okirikiri a kwụnyere n’akụkụ Igbe ahụ, ka e jiri ha na-ebu Igbe ahụ.+ 6 O ji ọlaedo a na-agwaghị agwa rụọ okwuchi ya.+ Ọ dị kubit abụọ na ọkara n’ogologo nakwa otu kubit na ọkara n’obosara.+ 7 O jikwa ọlaedo rụọ cherob abụọ.+ O ji hama kụọ ha. Ha dị na nsọtụ abụọ nke okwuchi igbe ahụ.+ 8 Otu cherob dị n’otu nsọtụ, cherob nke ọzọ adịrị na nsọtụ nke ọzọ. Ọ rụrụ cherob ndị ahụ na nsọtụ abụọ nke okwuchi igbe ahụ. 9 Cherob abụọ ndị ahụ chịliri nku ha abụọ elu, sachie okwuchi igbe ahụ.+ Ha chere ibe ha ihu, ihu ha kpudokwara n’okwuchi igbe ahụ.+ 10 O jizi osisi akeshịa rụọ tebụl.+ Ọ dị kubit abụọ n’ogologo, otu kubit n’obosara, nakwa otu kubit na ọkara n’ịdị elu.+ 11 O wee jiri ọlaedo a na-agwaghị agwa machie ya, jirikwa ọlaedo kpụọ ihe ịchọ mma gburugburu ọnụ ya. 12 Ọ rụnyere ihe obosara ya hà ka uhiè ọbụ aka mmadụ* gburugburu ọnụ ya ma jiri ọlaedo kpụọ ihe ịchọ mma gburugburu ihe ahụ ọ rụnyere n’ọnụ ya. 13 O jikwa ọlaedo kpụọ ihe anọ dị okirikiri ma kwụnye ha n’akụkụ anọ nke tebụl ahụ, n’ebe a rụnyere ụkwụ ya anọ. 14 Ihe ndị ahụ dị okirikiri dị nso n’ihe ahụ a rụnyere n’ọnụ tebụl ahụ ka ọ bụrụ ebe a ga-etinye okporo osisi ndị a ga-eji na-ebu tebụl ahụ. 15 O wee jiri osisi akeshịa rụọ okporo osisi ndị ahụ ma jiri ọlaedo machie ha ka e jiri ha na-ebu tebụl ahụ. 16 O jizi ọlaedo a na-agwaghị agwa kpụọ arịa ndị dị n’elu tebụl ahụ, ya bụ, efere ya, iko ya, nakwa ọkwá ya na ihe mmiri ya ndị a ga-eji na-awụsa àjà mmanya.+ 17 O wee jiri ọlaedo a na-agwaghị agwa rụọ ihe e ji adọsa ọkụ.*+ O ji hama kụọ ihe a e ji adọsa ọkụ. Ụkwụ ya, okporo ya, alaka ya, iko ya, isi ya, na ifuru ya bụ otu ihe.+ 18 O nwere alaka isii n’akụkụ ya abụọ. Alaka atọ dị n’otu akụkụ ya, alaka atọ adịrị n’akụkụ ya nke ọzọ. 19 Iko atọ ndị yiri okooko almọnd dị n’alaka nke ọ bụla dị n’otu akụkụ, otu isi na otu ifuru adịrị n’agbata otu iko na iko ibe ya. Iko atọ ndị yiri okooko almọnd dịkwa n’alaka nke ọ bụla dị n’akụkụ ya nke ọzọ, otu isi na otu ifuru adịrịkwa n’agbata otu iko na iko ibe ya. Ọ bụ otú a ka e si rụọ alaka isii ahụ ka ha si n’okporo ihe ahụ e ji adọsa ọkụ* ahụ pụta. 20 E nwekwara iko anọ yiri okooko almọnd n’okporo ihe ahụ e ji adọsa ọkụ.* Otu isi na otu ifuru dịkwa n’agbata otu iko na iko ibe ya. 21 Otu isi dị n’okpuru alaka abụọ mbụ si n’okporo ahụ pụta. Otu isi dịkwa n’okpuru alaka abụọ ọzọ na-eso ha. Otu isi dịkwa n’okpuru alaka abụọ ọzọ na-eso ha, ya bụ, alaka isii ndị si n’okporo ihe ahụ e ji adọsa ọkụ* pụta. 22 Ọ bụ otu ọlaedo a na-agwaghị agwa ka e ji rụọ isi ya niile na alaka ya niile na ihe niile dị n’ihe ahụ e ji adọsa ọkụ.* Ha niile bụ otu ihe e ji hama kụọ. 23 O jizi ọlaedo a na-agwaghị agwa rụọ ọkụ* ya asaa+ na mkpà ndị e ji ejide owu ya na ihe ndị a ga-eji na-agụnye owu a mụrụ amụ. 24 O ji otu talent* ọlaedo a na-agwaghị agwa rụọ ihe a e ji adọsa ọkụ* na arịa ya niile. 25 O wee jiri osisi akeshịa rụọ ebe ịchụàjà insens.+ O nwere akụkụ anọ há nhata. Ọ dị otu kubit n’ogologo, otu kubit n’obosara, na kubit abụọ n’ịdị elu. A rụkọtara ahụ́ ya na mpi ndị dị na ya ka ha bụrụ otu.+ 26 O ji ọlaedo a na-agwaghị agwa machie ya, ma elu ya ma akụkụ ya niile gbaa gburugburu ma mpi ndị dị na ya. O jikwa ọlaedo kpụọ ihe ịchọ mma gburugburu ọnụ ya. 27 O ji ọlaedo kpụọ ihe abụọ dị okirikiri n’otu akụkụ ya nakwa n’akụkụ ya nke ọzọ, n’okpuru ihe ịchọ mma a kpụrụ n’ọnụ ya. Ha ga na-ejide okporo osisi ndị a ga-eji na-ebu ya. 28 O jizi osisi akeshịa rụọ okporo osisi ndị ahụ ma jiri ọlaedo machie ha. 29 O mekwara mmanụ nsọ a ga-eji na-ete mmadụ mmanụ+ na insens na-esi ísì ọma a na-agwaghị ihe ọ bụla,+ nke a gwakọtara nke ọma.*
^ Ihe dị ka sentimita 7.4 (inch 2.9). Gụọ B14.
^ Ma ọ bụ “nke dị ka nke onye na-eme mmanụ otite mere.”